Fitaovam-pifaneraseràna: Ny Fitendry Virtoaly & Ny “Translittération” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2012 8:37 GMT
Eritrereto hoe manoratra “script” tsy nifototra amin'ny teny Latina ianao ary miraikitra eo amin'ny trano kely iray ahafahana mampiasa aterineto amina seranam-piaramanidina any ivelany, sady miezaka ny maka sary an-tsaina ny fomba handefasana hafatra amin'ny fiteninao. Mety ny PC ampiasainao mihitsy no manana karazana fitendry hafa nohon'ny “qwerty” ary tsy misy fitarihana amin'ny fiteny maro ao amin'ny OS. Misy fitaovana maromaro ampiasaina amin'ny aterineto izay afaka hamonjy anao.
Ny fitendry virtoaly dia rindrambaiko iray izay mamela ny mpampiasa azy hampiditra tarehin-tsoratra. Ny fitendry virtoaly dia afaka mandeha hatrany miaraka amin'ny karazana fitaovam-pampidirana samihafa, izay mety misy fàfana fikitika, ny fitendry sy ny voalavo fampiasa amin'ny solosaina ankehitriny. (Wikipedia)
Ny fitendry virtoaly dia tena efa be mpampiasa tokoa ho toy ny fomba fampidiran-javatra ho ao anaty fitaovana amin'ny alàlan'ny fàfana miaraka amin'ny fitendry tsy hita maso, toy ny solosaina fanao any anaty paosy, “personal digital assistant (PDA),” ny solosaina fisaka na ny fàfana fikitika izay ananan'ny finday. Misy karazana endrika fitendry virtoaly maro izay mipetraka anaty aterineto. Ny Gate2Home Virtual Keyboard dia iray amin'ny fitaovana lehibe indindra ao amin'ny aterineto.
“Ity tranonkala ity dia manome fahafahana anao hanoratra amin'ny fiteninao, na aiza na aiza misy anao eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fitendry maka endriky ny tena izy eo amin'ny fàfana, ao anaty aterineto.
Ny tanjona lehibe indrindra ho an'ity tranonkala ity dia ny hamelàna ny olona izay manana olana amin'ny fanoratana/fanoratana amin'ny milina/fikarohana anaty aterineto amin'ny fiteniny manokana ka mba hahafahany manao izany (indrindra indrindra ny mpivezivezy/ny mpizahatany na koa ireo izay rehetra eo anoloan'ny solosaina vahiny).”
Ny zava-dehibe asongadina dia ilay ianao ho afaka misafidy avy amin'ireo lisitra fitendry mifanaraka amin'ny fitendrin'ilay solosaina sy misafidy ny fitendry amin'ny fiteninao ( izay mifandray tsara mihitsy) ka ho azo ampiasaina ny fitendrin'ilay solosaina sy ny voalaokeliny mba hampidiranao soratra.
Ilay tranonkala sy ilay “gadget” dia nahazo ny “mention honorable” na ny “mari-pankasitrahana faran'izay mendrika” tao amin'ny Google Desktop Gadgets Contest ary “gadget” fototra tao amin'ny iGoogle nandritry ny fotoana maro.
Ny fitendry virtoaly iray hafa dia ny Branah.com izay manana fiteny miisa 53.
Ny ” Translittération”, na fikisahan'ny rafi-panoratana iray ho aminà iray hafa.
Ny “translittération” dia karazanà fandikàn-teny, ary manova ny lahatsoratra avy ao aminà “script” mankany aminà iray hafa. (Wikipedia)
Ny “translittération systématique” dia ny kisary avy aminà rafitra fanoratana iray mankany amin'ny iray hafa, isaky ny teny, na azo atao isaky ny voanteny ihany koa. Ny Google Transliteration dia iray amin'ny fitaovana tena be mpampiasa tokoa. New Melchizedec Sundararaj, Injiniera iray momban'ny rindrambaiko ao amin'ny Google dia nanoratra ny Aprily 2010 fa:
Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto, dia tsy mora mihitsy ny manoratra amin'ny fiteny maro izay ampiasàna tarehin-tsoratra tokana monja toy ny Hindi, Hebreo ary Arabo. Ny ankamaroan'ny fitendry izay avela hisy ny terehin-tsoratra Romana (ny abidy ampiasain'ny ankamaroan'ny fiteny tandrefana) sy hanova ny “script” dia mety ho sarotra ihany. Mba hanamoràna ity dingana ity dia nandefa dika efa nohatsaraina avy amin'ny “Google Transliteration” izahay tamin'ny farany taona lasa, tolotra izay mamela anao hanova ny fomba fihainoana teny Romana ho aminà karazana lahatsoratra maro hafa.
Misy karazana fitaovana “translittération” maro fihainoana ao amin'ny aterineto. Ohatra amin'izany ny fiteny ao Bengali izay misy safidy toy ny fitaovana Prabasi sy ny Microsoft Indic language input tool sns.
Tena zava-dehibe ny mamela ireo mpampiasa mba hamorona votoaty amin'ny fiteniny manokana ao amin'ny aterineto satria tsy misy fifandraisana hitondra ny fanohanan-kevitra mivaingna sy mifanandrify raha toa ka tsy amin'ny fiteniny manokana. Ny Fitendry Virtoaly & fitaovana “Transliteration” dia manampy antsika handresy ny sakan'ny fiteny ao amin'ny aterineto.
11 ora izayBorkina Faso